သူသတိရင် ဖုန်းဆက်လာမှာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မျှော်ဖြစ်ပါသေးတယ် – Candle Myanmar
ညတွေရောက်လာတဲ့အခါ ပထမဆုံးမျှော်ဖြစ်တာက သူဖုန်းများခေါ်လာမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ညတွေမအိပ်ပဲ မျှော်ဖြစ်တယ်လေ .. သူ Good Night ပြောပြီးအိပ်တဲ့ ညတွေမှာမှ အိပ်မက်လှလှမက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်အစွဲကလဲ ဖျောက်ရခက်နေတော့ ညတွေတိုင်း မျှော်ဖြစ်တယ်
သူဖုန်းခေါ်လာရင် အသံမကြားမှာစိုးလို့အမြဲSilent လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းလေးတောင် အသံချဲ့ထားသေးတယ် ဘယ်လောက်တောင်ရူးလိုက်သလဲ သူခေါ်မလာရင် ကိုယ်ခေါ်လိုက်ပေါ့ တဲ့ ကျွန်မ မာနတွေထားပြီး မခေါ်ဖြစ်တာ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး
ကိုယ်ကမျှော်နေပေမယ့် သူက မျှော်မနေတဲ့အခါ ကိုယ်ခေါ်တဲ့ဖုန်းဟာသူ့အတွက် အနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်ရင်း ပြဿနာတွေတက်မှာစိုးလို့သာ ကိုယ်ရဲ့ အလွတ်ရနေတဲ့နံပါတ်လေးကို မနှိပ်ဖြစ်အောင် ထိန်းထားရုံပါ ဒီည ပြဿနာတွေတက်ပြီး တကယ်ဝေးသွားတော့မှာလားဆိုပြီး မတွေးချင်တော့ရုံပါ
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် Good Night မပြောပဲ အိပ်ပျော်ကြပြီဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တကယ်ဝေးသွားကြပြီတဲ့ အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ပဲ ကျွန်မတို့မဝေးသေးဘူးဆိုတဲ့ အားလေးမွေးဖို့ သူဆက်လာမယ့်ဖုန်းကို မျှော်နေဖြစ်တာပါ .
ဒီတစ်ညတော့ အရင်နေ့က ညတွေကို ဖုန်းလေးကိုင်ပြီး မပျော်ပဲ အိပ်ရတဲ့ညလေးတစ်ည မဖြစ်စေချင်တော့ဘူး ကျွန်မ အိပ်ရေးပျက်တာတွေများပြီလေ ပြီးတော့ ငိုရတာလဲ များပြီ .
Previous: ဖေ့ဘွတ်ကြည့်ရင်း စိတ်ညှစ်နေလား? စိတ်ညှစ်တာတွေ ပြေစေဖို့ အတွက်…..
Next: လူဟာ အရမ်းအားငယ်နေချိန်မှာ ပထမဆုံး သတိရမိတတ်တာက သူ့အတွက်အရေးပါဆုံးဆိုတဲ့လူကိုပါတဲ့